Dawada lidka bakteeriyada
Cudurka loo yaqaan 'Amoxicillin'
Glutaral Iyo Deciquam
2019 Depond ayaa si guul leh uga gudbay kormeerka Ethiopia GMP
Laga soo bilaabo Oktoobar 21 ilaa 23, 2019, Hebei Depond wuxuu aqbalay aqbalaadda iyo ogolaanshaha Wasaaradda Beeraha ee Itoobiya. Kooxda baaristu waxay ka gudbeen kormeerka sedexda maalmood ah ee baaritaanka iyo dib u eegista dukumintiga, waxayna rumeysan yihiin in Hebei Depond uu buuxiyey shuruudaha maamulka WHO-GMP ee Wasaaradda beeraha.
2019 Depond wuxuu si guul leh u gudbiyay kormeerka qaran ee GMP
Laga soo bilaabo Oktoobar 19 illaa 20, 2019, kooxda khubarada caafimaadka GMP ee khubarada caafimaadka ee Hebei waxay 5-sano baaritaan dib-u-fiirineed ku sameeyeen GMP magaalada Depond, Gobolka Hebei, iyadoo ay ka soo qeybgaleen hoggaamiyeyaasha gobollada, degmooyinka iyo degmada iyo khubaro. Kulan salaan, Mr. Ye Chao, gen ...
Hiigsiga sanadka 2019-ka Shiinaha oo ah Xayawaanka Caalamiga ah ee Xayawaanka ku Nool Expo-Wuhan
Bishii Meey 18, 2019, waa 17-kii (2019) Shiinaha Xannaanada Xayawaanka ee Sanadlaha ah iyo 2019 Shixnadda Xayawaanka ee Caalamiga ah ee Shiineeska ah ayaa laga furay Xarunta Caalamiga ah ee Wuhan. Iyada oo ujeedada iyo himilada hal abuurka ay hogaamineyso hormarka warshadaha, Animal Husbandry Expo ayaa soo bandhigi doonta oo kor u qaadi doonta lat ...
2019 Depond ayaa si guul leh uga gudbay kormeerka Suudaan GMP
Laga bilaabo Diseembar 15 ilaa 19, 2019, Hebei Depond wuxuu aqbalay aqbalaadda iyo ansixinta Wasaaradda Beeraha ee Suudaan. Kooxda kormeerka waxay afarta maalmood ku dhaafeen kormeerka goobta iyo dib u eegista dokumentiga, waxayna rumeysan yihiin in Hebei Depond uu buuxiyey shuruudaha maamulka WHO-GMP ee Wasaaradda Beeraha ...
Qiyaasta sanadka 2019 Russia International Animal Husbandry Expo
Bishii Meey 28-30, 2019, Expo xayawaanka xoolaha ee Expo ayaa lagu qabtay magaalada Moosko ee dalka Ruushka, banaanbaxa ayaa si guul leh loogu qabtay Xarunta Caalamiga ah ee Bandhigga iyo Bandhigga Caalamiga ah ee Krokus ee Moscow. Bandhigu wuxuu socday saddex maalmood. In kabadan 300 oo carwooyin iyo in kabadan 6000 oo iibsadeyaal ayaa kasoo qeyb galay exh ...
Astaamaha 2019 Thailand VIV Asia - Bangkok
Ilaa 1991, VIV Asia waxaa la qabtaa labadii sanaba mar. Xilligan la joogo, wuxuu qabtay 17 kalfadhi. Bandhigu wuxuu daboolayaa doofaarka, digaagga, lo'da, alaabada biyaha iyo noocyada kale ee xoolaha, tikniyoolajiyada iyo adeegyada dhammaan dhinacyada silsiladaha warshadaha laga bilaabo “quudinta illaa cuntada”, ururinta le ...
Qiyaasta sanadka 2019 Bangiga Caalamiga ah ee Xayawaanka Xayawaanka ee Expo
Bishii Maarso 7-9, Hebei Depond wuxuu ka qeybgalay Bandhigga Xayawaanka ee Xayawaanka ah ee Bangiyada Caalamiga ah ee 2019, kaasoo ahaa guul weyn oo wax badan laga qabtay. Bangladesh waa mid ka mid suuqyada ugu dhoofinta badan beeraha iyo xoolaha sanadihii la soo dhaafay. Si kor loogu qaado tartan aqooneedka ...
Muhiimad ahaan VIV Nanjing 2018
Laga soo bilaabo Sebtember 17 ilaa 19, VIV 2018 Shiinaha oo ah Bandhig xawaare sare oo xayawaanka xoolaha ah ayaa lagu qabtay Nanjing, oo ah caasimadii hore ee Shiinaha. Iyada oo ay tahay hawada dabaysha ee warshadaha xoolaha ee caalamiga ah iyo goobta ay ku kulmaan xirfadleyda, in kabadan 500 oo caruur iyo caruur ajnabi muujinaya ...
2018 Hoos ka dhagayso 16-ka Shiinaha ee Xayawaanka ku Nool Xayawaanka Expo-Chongqing
Bishii Meey 18, 16-keedii (2018) Shiinaha Xawaaladaha Xayawaanka ee Shiinaha ayaa si weyn loogu furay Xarunta Chongqing Expo Center Expo. Bandhigga oo dhami wuxuu socday saddex maalmood. Goobta bandhigga ee 200000 mitir murabac, kumanaan shirkado caan ah oo gudaha iyo shisheeyaha ah ayaa ku soo wada urursaday halkan. Intii lagu gudajiray Xayawaanka Ninka ...
Indha-indheeyn ayaa si guul leh uga gudbey kormeerka Libya GMP ee 2018
Laga soo bilaabo 24-kii Maarso illaa 26, 2018, Hebei Depond wuxuu aqbalay kormeerka Wasaaradda Beeraha ee Liibiya. Kooxda baaristu waxay ka gudbeen kormeerka sedex maalmood ee baarista iyo dib u eegista dokumentiga, waxayna rumeysan yihiin in Hebei Depond uu buuxiyo shuruudaha WHO-GMP, oo ay qiimeyn heer sare ah ka sameeyeen Hebei Depond. Tani ...
Hiigsiga 2018 ee bandhigga beeraha caalamiga ee Kazakhstan-Astana
Bandhig carweedka caalamiga ah ee Kazakhstan waxaa aasaasay shirkad caalami ah oo loo yaqaan 'TNT International Exhibition Company of the Mareykan' waxaana si guul leh lagu qabtay 13 jeer. Bandhig-sanadeedka, alaabada daafaha adduunka oo dhan ayaa ku hawlanaa mashiinnada beeraha, beero-kiimikada iyo xannaanada xoolaha ...
2017 Qiyaasta 6-aad ee caalamiga ah ee Xayawaanada Xoolaha ee Expo-Lahore
Laga soo bilaabo 24-kii Ogosto 24 - 26, 2017, Bandhigii 6-aad ee Caalamiga ah ee xoolaha ee Pakistan ayaa lagu qabtay Lahore. Hebei Depond wuxuu muuqaal cajiib ah ka sameeyay digaaga Pakistan Expo, xilligaas oo lagu wareystay wararka maxalliga ah. Hebei Depond, iyada oo ah dhaqashada xoolaha Shiinaha iyo shirkad dawooyinka, ...
No.8 Shuangtong Road, degmada Luquan, magaalada Shijiazhuang, gobolka Hebei, Shiinaha